Ny lova napetrak’ireo maritirin’ny tany mihotsaka - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Omaira Sanchez ? Iza no mahatadidy izany anarana izany ? Angamba efa mihavitsy ankehitriny ireo tanora mahafantatra izany anarana izany. Ireo efa nahazo taona koa aza angamba efa manomboka manadino.
Indro misy rohy vitsivitsy ireto ho an’ireo afaka mijery internety na aterineto :
Olona an-tapitrisany maneran-tany no nijery mivantana ny fahafatesan’i Omaira Sanchez. Tovovavy kolombianina vao 13 taona izy no maty tototry ny tany navoakan’ny volkano iray antsoina hoe Nevado del Ruiz. Ny 13 novambra 1985 no nitrangan’izany. 30 taona lasa izay tao Armero-Guayabal. Nogiazan’ny tany sy béton sy rano nandritra ny telo andro sy telo alina izy. Tsy afa-nanaotra ny mpitondra tany antoerana. Televiziona maro no nandefa mivantana ny ady farany natrehin’ity tovovavy ity tamin’izany fotoana izany.
Mitamberina antsaina izany raha nahita ny zava-nisy teny Andohanimandroseza farany teo izay toerana nahafaty an’i Félicien Théo Rakotovao fa izay no anarana nampalaza azy fahavelony raha Félicien Rakotomalala no anaran’ity tovolahy ity ara-panjakana.
Hahitana io tranga io fa ny vaovao iray dia ny fihetseham-po naterany no hahazoana ny fifantohan-tsain’ny mpanara-baovao. Zaza tsisy mahalala io tovovavy io. Lavitra izany Colombie izany ary ny resaka zava-mahadomelina aza no ahafantarana izany firenena izany. Saingy tamin’io fotoana io dia voasarika izao tontolo izao. Mety misy hilaza fa curiosité morbide (ialana tsiny fa mbola tsy hita izay voambolana malagasy tena mahadika azy) no tena natanjaka tamin’izany fotoana izany.
Lavitra tokoa i Colombie ka mety ho nisy Malagasy tsy naharaka na tsy nahita ny fitantarana mivantana io ady farany natrehan’ity zazavavy ity. Misy tokoa ireo mpikirakira vaovao no milaza fa ny zava-misy akaiky no mahasarika ny olona. Izay mety ho tsy marina loatra. Jereo fa raha samy baolina kitra izao dia ny coupe du monde sy ny champions league no be mpanaraka eto Madagasikara toa izay ny Can na maro amin’ireo mpilalao ao amin’ny Can aza no misehatra amin’ireo fifaninana roa voatanisa teo. Na eo aza izany dia ndao ny zava-nisy teto an-toerana no ndeha hijerena tranga hafa indray.
Ohatra tsy nahasarika olona
Andro vitsy na ora akory aza talohan’i Félicien dia efa nisy tovolahy roa maty nianjeran’ny trano. Ora ampolony no nikarohana azy ireo raha roampolo mahery no niasan’ny mpamonjy voina nikarohana an’i Félicien. Tovolahy roa mpianatra eny amin’ny oniversiten’Ankatso no isan’ny maty nianjeran’ny trano tao. Tovolahy avy any Itasy ny iray ary avy any Maroantsetra ny iray. Ny fianarana ambony no niraisany. Tsy miara-monina akory izy ireo araka ny filazam-baovao fa sendra nangataka mba hampiasa solosaina ny iray io alina io kinanjo nifamotoana tamin’ny fahafatesana. Araka ny filazana’ireo nanao fanadihadiana aza dia nanana sipa ilay mpianatra iray nampiantrano ary dia niangaviany io sipany io hatory any an-kafa io alina io mba hahafahan’izy roalahy mianatra. Feno ny kasinga raha te hampihetsi-po tokoa. Saingy… Tsy nahasarika ny olona izany. Tsy voatery rehefa misy kasinga mety hanairana fihetseham-po dia hahomby. Ireo fandroahana mpiavy tsy manana karatra hipetrahana ao Frantsa no ahafahana manamarina izany. Mahatratra 36 822 ny olona voaroaka tao Frantsa tamin’ny taona 2012. Saingy… ny tranga nahazo an’i Léonarda no nahasarika olona hihetsika hiaro azy. Léonarda dia tovovavy tsy nanana taratasy hahazoany mipetraka ao Frantsa ary ny fisamboran’ny polisy azy tao anatin’ny taksibe mpitondra mpianatra no heverina fa namoha ny olona fa tsy ilay tovovavy tsy nanana taratasy fotsiny ihany. Mifangaro ao izany ny fiarovana olona sy tsy fitiavana mpitandro filaminana. Misy antony iray fanampiny hatrany izany hanairana ny olona. Raha ny azy roalahy ireto dia tsy eo ilay mpampita vaovao voakasika, na olo-malaza voasaringotra (olomboafidy, tale jeneraly…).
Fisaorana ireo mpamonjy voina
Isan’ny azo resahina kosa tamin’izao tranga izao dia ny fisaorana an’ireo mpamonjy voina. Niasa andro aman’alina ra-bakiteny. Isaorana izy ireo na eo aza ny fitenenana hoe karama ny azy ireo. Ny fandefasana mivantana amin’ny haino aman-jery ny ezaka tontosain’izy ireo dia fahita matetika raha any ivelany any. Indrindra rehefa misy olona nihontsahan’ny ranomandry any antendrombohitra any rehefa ririna na koa olona mpianika tendrombohitra (alpiniste) latsaka andavaka (alpiniste). Ho an’ireo firenena manana fitaovana hitaterana mivantana ny vaovao dia fahita izany. Ho antsika eto no somary manavao amin’izany fitantarana mivantana izany satria mbola lafo ny fitantarana mivantana amin’ny televiziona. Na koa mbola ny resaka hetsika politika no tena nahasarika olona raha ny fitantarana amin’ny onjam-peo (radio) sy sary (televiziona).
Ny irariana dia tsy ho fatifaty foana ry zareo ireo. Tsara raha araraotina (tsy sanatria manararao-paty akory) ny fahafantaran’ny olona marobe ny zava-nisy. Tokony hisy fepetra raisina izay iantsoana azy no tsy fantatra na ho dian’i Félicien Théo Rakotovao na ho lalàna Félicien Théo Rakotovao mahakasika ny fanamboarana trano eto Madagasikara. Ekena fa tsy mahazatra antsika ny fampitondrana anaran’olona ny lalàna iray ny antsika dia laharana no ahafantarana lalàna iray, saingy kosa eto raha mitondra anaran’ity tovolahy nalaza taorian’ny nahafaty azy ity dia ho mora mitanisa izany lalàna izany. Mba tsy ho fatifaty foana izy ireo dia izay no lova lehibe iriana ho raisintsika avy amin’izy ireo.